I-WSL: indlela yokuhlaziya Ubuntu kwiWindows kwiDisco Dingo | Ubunlog
Okwangoku, xa sizama ukufaka Ubuntu Windows 10 ngokusebenzisa I-WSL (Subsytem yeWindows kwiLinux), into esiyibonayo ifumaneka kwiVenkile kaMicrosoft ziinguqulelo ezimbini ze-LTS (18.04 kunye ne-16.04) kunye neyesithathu leyo… kakuhle, ikwayiLTS. Eyona nto sinokuyifaka kwivenkile esemthethweni yeWindows yiBionic Beaver, kodwa ngaba singahlaziya kuhlobo lwamva nje? Impendulo ngu-ewe, kwaye ngexesha lokubhala eli nqaku sinakho nyusela kwiDisco Dingo.
Ukwenza njalo kulula kakhulu. Kuya kufuneka sikhumbule umthetho wokuqala ukuze yethu Ubuntu bokugcina sinike imikhondo eyimfuneko yokulandela inkqubo. Eyona nto inzima iya kuba yinto engafuni ukuba siqwalaselwe: yiba nomonde de zonke iipakeji zihlaziywe. Apha sichaza into ekufuneka siyenzile.
Hlaziya i-WSL yethu kuhlobo lwamva ngokuhlela ifayile
Umyalelo ekufuneka siwukhumbule yile ilandelayo:
Xa usifaka, siza kusinika impazamo / isikhombisi esifana nesikulo skrini ilandelayo:
Into esixelela yona kukuba sele sisebenzisa olona hlobo lweLTS luhlaziyiweyo kwaye ukuba sifuna ukusebenzisa inguqulelo yamva nje engeyiyo ye-LTS kufuneka siqwalasele ifayile esikhankanyayo Ukutshintsha umgca «Ngokukhawuleza = LTS» ukuya «Ukukhawulezisa = ngesiqhelo». Ukwenza njalo, sichwetheza lo myalelo kwaye ucinezele ukungena:
Kwiskrini esivulayo, kuya kufuneka senze olu tshintsho sele lukhankanyiwe, cinezela u-Ctrl + X, emva koko u- "Y" kwaye wamkele nge-enter. Okokugqibela, sibeka umthetho wokuqala kwakhona ukwenza uhlaziyo. Kwaye siya kwikofu, kuba ingathatha ixesha elide. Okubaluleke ngakumbi, kunokuba yinto efanelekileyo ukushiya ikhompyutha isebenza yodwa ngelixa senza enye into. Kodwa asinakuba kude kakhulu kuba siza kubona i-bug ene-LXD (i-WSL ayikaxhaswa yiphakheji ngokukhawuleza) kwaye kuya kufuneka siqinisekise / samkele utshintsho oluthile.
Kuba eli nqaku limfutshane kwaye imiyalelo yayo ilula, ndingathanda ukuthatha umzuzu ukuba ndikhankanye ukuba iWSL inokudityaniswa neWindows, Oko kukuthi, Singasebenzisa imiyalelo yeLinux ngokuthe ngqo kwiPowerShell okanye isindululi se "Run". Kuya kufuneka ukhumbule ukubeka "wsl" ngaphambili ngaphandle kwezicatshulwa, ke umyalelo ofana nokuhlaziya iiphakheji unokujongeka njengo "wsl sudo apt uhlaziyo".
Ngokusengqiqweni, i-WSL ayifani nokusebenzisa iLinux njengendalo, kodwa iluncedo lokudlala olunqwenelwa ngabasebenzisi abaninzi. Ngaba ungomnye wabo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-WSL: indlela yokuphucula Ubuntu kwiWindows kwiDisco Dingo